Azerbaijan: Ny karatra Armeniana no lalaovina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2010 3:34 GMT
Raha mbola eo ampanomanana ny fifidianana izay ho ao amin'ny parlemanta hatao amin'ny 7 Novambra i Azerbaijan, ireo mpitoraka bilaogy avy amin'ny mpanohitra kosa efa maneho sahady ny tsy hafaliany momba ny ho fomba fizotran'ny fifidianana. Tamin'ity herinandro ity ohatra, nipoitra ny olana momba ny fandraketana ny anaran'irao mpirotsaka avy amin'ny mpanohitra, ary ankehitriny ny gazety ao an-toerana dia manomboka mamoaka ny kiana avy amin'ny governemanta milaza azy ireny ho fampielezan-kevitra maloto mikendry fotsiny ny hanaratsy endrika azy ireo eo imason'ny mpifidy.
Ary, raha mbola tsy mifarana akory ny fifandirana momba ireo faritany ifandroritana amin'i Armenia ao Nagorno Karabakh, ny mpitoraka bilaogy sasany milaza fa misy làlana tsotra azo ahatongavana amin'izany. In Mutatione Fortitudo, ohatra, dia manome antsipirihany ny fomba heveriny ho fanangànana fampielezan-kevitra manozongozona.
Ny bilaogy Önər [AZ] dia manamarika koa.
Kanefa, satria tsy mbola misy mihitsy zavatra azo anaporofoana ny maha-mitombina na tsia ireny honohono milaza tsikombakomba sy fifanarahana miafina rehetra eo amin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ireny, ny zava-doza goavana ateraky ny filazana toy izany, alefan'ny mpampita vaovao mpomba ny governemanta mamely ny mpanohitra, dia tena misy fiantraikany mivaingana tokoa. Na izany aza, ny sasany toy ny aligenjevi [AZ] dia mba nanamarika farafaharatsiny ny esoeso tao anatina fanehoankevitra iray napetraka tao amin'ny andiany amin'ny teny Azerbaijani amin'ny bilaogy voalohany voatanisa ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Mandritra izany fotoana izany, ao anatin'ny tanjona hanandratra ny tsy fiandaniana sy ny fitaterana ny vaovao araka ny tena zava-misy any amin'ny andaniny ataon'ny ankilany, ny mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices any Kaokazy dia nihaona tamin'ny Filoha sy solontena hafa avy ao amin'ny Eurasia Foundation avy any Washington D.C. tamin'ny Jolay mba hifanakalo hevitra ny amin'izay ho tohana aroso ny fihaonan'ny mpanao gazety sy mpitoraka bilaogy avy eo an-toerana sy avy any ivelany hatao ao Tbilisi, Georgia, amin'ny faramparan'ity volana ity.
Ny mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices avy any Kaokazy Onnik Krikorian, ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices Aygun Janmammadova, dia ho isan'ny ao anatin'ny tariky ny Global Voices amin'ny teny Rosiana, ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices, Arzu Geybullayeva dia handray anjara amin'izany. Ny fanavaozam-baovao mikasika ny hetsika dia ho hita ao amin'ny pejin'ny fandrakofana manokana mikasika ny Feon'ny Fifandirana any Kaokazy.
Azerbaijan 10 ora izay